Waxaa Gobolka Oklahama ee Maraykanka ka dhacay Duufaan (Tornado) xoogan oo Guryo badan baabi'isay dad farabadan oo 90 kur u dhaafayana ay ku dhinteen. Dhaawaxana waxaa la sheegay inuu 120 kor u dhaafay. Dadka dhintay ayaa la sheegay ilaa 20 inay Carruur yihiin.
Ruushka oo la sheegay inay suuriya siiyeen Gantaal Casri ah oo Maraakiibta lagu gano
Friday, 17 May 2013 12:35
Waddanka Ruushka ayaa waxaa la sheegay inay waddanka Suuriya u soo gudbiyeen gantaal casri ah oo Maraakiibta dagaalka lagu gano. Gantaalada ayaa waxa la sheegay inay 72 Xabo dhanyihiin iyo 36 Gaari oo lagu qaado Gantaaladaa. Gantaalada ayaa waxaa la sheegay inaysan waxba ka tarayn la dagaalanka jabhadda dagaalka kula jirta Xukuumada Suuriya, laakiin ay ka hortagi karaan haddii wadamo shisheeye ay soo farageliyaan si ay u caawiyaan Mucaaradka suuriya.
Intaa kuma ekee waxaa la sheegay in Ruushku rabo inuu Gantaalo kale oo Casri ah u soo gudbiyo Suuriya.
Qarax ka dhacay Magaalo Xuduuda Turkiga iyo Suuriya kutaal iyo ugu yaraan 42 Qof oo ku dhintay
Saturday, 11 May 2013 22:24
Waxaa Qarax aad u culus ka dhacay Magaalo kutaal Xuduuda Turkiga iyo Suuriya. Qaraxaa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 42 Qof waxaana ku dhaawacmay in Boqol ka badan. Qaraxa ayaa wuxuu ahaa mid lagu soo qariyey Haanta Baasiinka ee Gaari.
Xukuumada Turkiya ayaa waxaa ay ku eedeeyeen Xukuumada Suuriya inay ka danbeeyeen Qaraxaa foosha xun.
Ra'iisul Wasaaraha Turkigaq oo Suuriya ku eedeeyey isticmaalka Gaaska Sunta ah
Ra'iisul Wasaaraka Dalka Turkiga ayaa waxaa uu Wadanka Suuriya ku eedeeyey inay isticmaaleen Gaaska Sunta ah.
Ruushka oo qorshaynaya inay Syria u soo gudbiyaan gantaal casri ee difaaca hawada
Sida Warar kala duwan sheegeen Wadanka Ruushka ayaa waxaa ay qorshaynayaan inay Syria u soo gudbiyaan Gantaal casri ah oo Hawada lagu difaaco.
Xukuumada Turkiga iyo Jabhadda PPK oo Heshiis Taariikhi ah galay
Thursday, 25 April 2013 23:44
Waxaa Heshiis Taariikhi ah galay Dowladda Turkiga iyo Jabhadda PKK oo mudo 30 Sano ka badan dagaal kula jirtey xukuumadda Turkiga. Madaxa Jabhadda PKK ayaa waxaa uu sheegay in Jabaddiisa ugu danbeyn 8 Bisha May ay ka guuri doonaan meelaha Saldhiga u ah ee Tarkiga ayna u guuri doonaan Waqooyiga Ciraaq.
Nimankii ka danbeeyey Qaraxii Boston oo la shaaceyey inay rabeeb inay New York Qaracyo kale ka fuliyaan
Thursday, 25 April 2013 23:36
Duqa Magaalada New York ayaa waxaa uu sheegay in Nimankii asbuuc ka hor Qaraxa ka geytey Magaalada Boston ay rabeen inay qaraxaa oo kale meesha bartamaha Magaalada New York ee Times Square ka fuliyaan. Markii ay Qaraxa Boston fuliyeen ayaa waxaa ay afduubteen Gaari yar, meel dhexe markay marayaanse waxaa ay dareemeen in Gaarigay ay wateen baasiinkii ka dhamaaday markaa ayey meesha baasiinka Baabuurta istaageen, saa awgeed Qodkii lahaa Gaariga ay afduubeen oo ay wateen ayaa ka fakaday kadibna Booliska ku wargeleyey Booliskiina markaa ayay raacdeeyeen.
Kadib raadraac weyn iyo dagaal 2 dii Nin mid ayaa dhintay midna asagoo dhaawac cuslus ay ayaa Nolol lagu qabtay ka dibna Isbitaaal la geeyey, waxaana laga soo oogey dacwad.
Syria oo lagu eedeeyey inay Gaas Sun ah adeeg sadeen
Thursday, 25 April 2013 23:29
Wadanka Syria ayaa waxaa lagu eedeeyey inay u adeeg sadeen Dagaalka u shexeeya iyaga iyo Jabhadda Mucaaradka ku Gaaska Sunta ah. Saas waxaa yiri Hay'adaha sirdoonka ee Reer Galbeedka sida UK iyo USA iwm. Wadanka Siiriya ayaa waxaa ka socdey sanadihii ugu danbeeyey Dagaal aad u Kharaar oo lagu hoobtay ina dhexeeya Xukuumadda Suuriya iyo Macaaradka Waddankaa. Dad aad iyo aad u Farabadan oo lagu qiyaasay in kor u dhaafaysa 70 kun ayaa ku dhintay ilaa hadda dagaalka, Malyan in kor u dhaafaysana waxaa ay u qaxeen Waddamada Deriska la ah Syria.
Booliska Kanada oo fashilay Qarax la rabey in Tareen lala beegsado
Tuesday, 23 April 2013 10:31
Booliska Waddanka Kanada ayaa waxaa ay shegeen in ay fashileen Qarax la rabey in Tareen lala beegsado. 2 Nin ayaa waxaa ay rabeen inay Qaraxa fuliyaan lana beegsadaan Tareen ka shaqeeya Kanada-USA oo New York u socdey. Qaraxa ayaa waxaa la rabey inay Buundo ku rakibaan.
Ragga rabey inay Qaraxa Fuliyaan ayaa waxaa ay ku noolyihiin Kanada, waxaase la sheegay inaysan haysan dhalashada Kanada wadanka ay kasoo jeedaanna lama sheegin.
Safaaradda Faransiiska ee Libya oo Qarax lala beegsaday
Tuesday, 23 April 2013 10:21
Waxaa maanta Qarax lala begsaday Safaardda Faransiiska ee Libya. Qaraxaa oo ahaa mid Gaari lagu rakibay ayaa waxaa uu dhaliyey khasare aan saa u weyneyn. 2 Nin oo Safaarada waardiye u ahaa ayaa ku dhaawacmay dhismaha Safaaradana waxaa soo gaarey bur bur. Ilaa hadda ayaan la shaacin cida ka danbeysey Qaraxan iyo sababta.